Nagu saabsan - Dongguan Vanhe Modular House Limited
Dongguan Vanhe qaybsan House Limited
wuxuu ku takhasusay Naqshadeynta, Soo-saarista, Suuqgeynta iyo Dhismaha guryaha loo diyaariyey. Waxaa la aasaasay 2012, DONGGUAN CITY, waxay sii wadaa inay sameyso guulo wax ku ool ah waxayna hadda noqotay shirkadda Shiinaha ugu weyn ee dhismaha iyo adeeg bixiyaha leh teknoolojiyad casri ah oo ku jirta guriga horay loo sii diyaariyey.
Iyada oo leh koox shaqo-badan iyo jawi shaqo oo iswaafajinaya, alaabooyinkeenu waa kuwo aad iyo aad ufiican oo kaladuwan, kaliya ma ahan qurux muuqaal ahaan, laakiin sidoo kale wax ku ool ah meelo badan. Waxaan haysannaa sahay hal-joog ah oo ah naqshadeynta, wax soo saarka, dhismaha iyo suuqgeynta.
Illaa iyo hadda, VANHE waxay si guul leh u bixisay kumanaan mashruuc guri oo horay loo sii qorsheeyay in ka badan 100 waddan, oo ay ku jiraan qorsheynta kaamka, naqshadeynta dhismaha, wax soo saarka warshadaha guryaha, gaadiidka, rakibaadda goobta, qurxinta gudaha, tas-hiilaadka xerada, iwm. VANHE waxay heshay ammaan sare macaamiisha laga helo tayada wax soo saarkeeda oo heer sare ah, tikniyoolajiyad dhismeed heer sare ah iyo u fiirsashada adeegga iibka kadib. Sababtoo ah tobanaan sano oo waayo-aragnimo qani ah ee dhismaha guryaha prefabriacated iyo sidoo kale uruurinta siyaasado qaran oo kala duwan, sharciyada, caadooyinka, dhaqanka iyo cimilada oo saameyn ku leh mashruuca oo si habsami leh u socda, VANHE ayaa hogaamineysay dhisme guryo horay loo sii qorsheeyay oo Shiinuhu leeyahay oo noqday adeeg bixiye la doorbido shirkadaha caanka ah ee dhismaha ee Shiinaha.
Sawirrada midigta ku yaal waa qaar ka mid ah mashaariic aannu iskaashi kala yeelannay adduunka oo dhaweyd. Haddii aad xiiseyneyso, waad gujin kartaa si aad u daawato
Wixii la gaaray, VANHE kuma qanacsana. Had iyo jeer waxay haysaa heer sare oo xamaasad waxbarasho ah, waxay muhiimad weyn siineysaa istiraatiijiyad horumarineed oo waarta iyo is-weydaarsiga waxayna si firfircoon wax ugu bartaa kuwa caalamiga ah ee caanka ah. Laga soo bilaabo 2012 illaa hadda, laga bilaabo dhalashadiisa aan caadiga ahayn illaa maanta sharafteeda, laga bilaabo bilowga naxdinta leh ee horumarka ba'an, dadka VANHE waxay sameeyeen waddo aan caadi ahayn oo leh hal-abuur iyo horumar. Laakiin daacadnimadu weligeed waxay u noqon doontaa ballanqaad daacad ah macaamiisha. Intaa waxaa dheer, waa nafta shirkadda.
Siddeed sano oo wada noolaansho ah ayaa dhisa boqortooyo iyo qarnigii qummanaanta ayaa horseeday heer sare. VANHE, oo ah nooca xambaara diyaaradaha ee warshadaha guryaha isku dhafan ee Shiinaha, ayaa sii wadi doona hogaaminta horumarka warshadaha waxayna qori doontaa cutub cusub oo shirkadda ka mid ah.